Mar kale Temsa waa la iibiyay! Marka yaa iibsanaya? | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulMar kale Temsa waa la iibiyay! Marka yaa iibsanaya?
18 / 02 / 2020 34 Istanbul, GUUD, WADADA, Nidaamyada Tire Wheels, Headline, Gobolka Marmara
temsa waa la iibinayaa markaa yaa iibsan doona
Sida ku xusan wararkii ugu dambeeyay, Sabanci Holding wuxuu iibsan doonaa 50% Sabsa Holding iyo 9% shirkadda soo saarta baska Czech ee Skoda, oo la dhibtooday saadaasha ka dib markii uu ku dhawaaqo heshiiska. Markaa, Sabancı Holding wuxuu iibsan doonaa Temsa, oo ay iibisay XNUMX bilood ka hor, oo uu la leeyahay wehel shisheeye oo uu dib u iibsado.
SözcüSida uu sheegayo warka Emre Özpeynirci ka; “Sabanci Holding iyo soo saaraha Czech trolleybus Skoda, kuwaas oo dalbaday heshiisyo iyo u kuurgalida saadaasha hawada bilihii ugu dambeeyay, waxay iibsanayaan saami boqolkiiba 50 ah.
In kasta oo la bartay in magaca shirkadda 'Skoda', oo iibsaday boqolkiiba 50 shirkadda, aanu ahayn sumad baabuur oo ka dhex jirta shirkadda VW Group ee Jarmalka, laakiin ay tahay soo-saare trolleybus ah, shirkadda ayaa markii ugu horreysa geli doonta wax soo saarka baska shirkadda Temsa.
Hadalada soo socda waxaa loo adeegsaday bayaanka lagu siiyay PDP ee ku saabsan iibinta:
Saaxiibka ugu weyn ee Gaadiidka Skoda, ppf iyo bulshada sabancı, waxay saxeexeen warqad ujeeddadeedu tahay in lagu iibsado gaadiidka TEMSA 50%.
Wehelka ugu weyn ee Skoda Transportation, PPF iyo Sabancı Group, waxay saxeexeen warqad ujeeddadeedu tahay in lagu qiimeeyo iibsashada dhammaan Gawaarida Gawaarida Temsa iyada oo leh qaab dhismeedkeeda 50-50% iskaashiga.
Waxay kuxirantahay dhameystirka dib u eegista faahfaahsan, gunaanadka wanaagsan ee wadahadalada iskaashiga ah iyo rukhsadaha lagama maarmaanka ah, iibsashada ayaa la sameyn doonaa.
Natiijada Skoda Gaadiidka ee liability in ay haysato kalsoonida iyo Sabanci Group ee dalka Turkiga, Temsa si ay u bilaabaan wax soo saarka mar kale iyo ujeedooyinka Tools Gaadiidka in ay qabsadaan dardar koritaanka cusub.
Horumar la xiriira maaddada ayaa lala wadaagi doonaa dadweynaha.
KU SII MAY 30, 2019
Bishii Meey 2019, shirkadda Sabancı Group waxay Temsa ka iibisay shirkadda fadhigeedu yahay dalka Switzerland ee 'True Value Capital', oo ay iska leeyihiin maalgashade Enver Rıfkı Ünver iyo afadiisa Rukiye Devres Ünver, $ 140 milyan, oo ay ku jiraan deyn, iyagoo lagu qiimeeyay $ 60 milyan.
Kooxda ayaa soo celisay kala badhkii Temsa kadib 9 bilood.
Besiktas waxay sidoo kale TEMSA ku leedahay Lyon
Ayaa sameeya mashaariicda ugu weyn
Temsa Global ayaa Turkey inay marti UITP
Saadka Sahayda Lagu Sameeyo 25 Million TL Fleet Maalgelinta Iskaashatada Iskaashatada Temsa
TEMSA Kobcinta Teknoolajiyada Waxay Cabbiraysaa Meelaha Wanaagsan ee Ujeeddadeeda
Gawaarida basaska waxay ku koraan TEMSA
Aslan Uzun, Madaxa cusub ee TEMSA
Yaa xaddidaya xawaaraha cayaaraha isboortiga
YHT Yaa qaadi kara safarka safarka?
Yaa doonayay inuu dalbado $ 1 bilyan oo tareenka xawaaraha sare leh?